Kuyini umehluko phakathi kwe WordPress.com ne WordPress.org? - I-Semalt inikeza impendulo
Uma uhlela ukuthuthukisa iwebhusayithi, kufanele ukhethe isiteji se-WordPress ukuze sakhelwe. Ngokwesilinganiso, amandla e-WordPress angaphezu kwamaphesenti angu-30 e-intanethi futhi ingenye yamapulatifomu adume kakhulu. Ihlinzeka ngezihloko eziningi, izici, izinketho, nezinto okumele uzikhethe kuzo. Kodwa ngaphambi kokuba ukhethe iZwiPress, kufanele wazi kahle umehluko wegamapress.com ne-wordpress.org. U-Julia Vashneva, umphathi we-8 (Semalt oyiMenenja yeMpumelelo yoMthengi oPhezulu, uye waphawula ukuthi nakuba umehluko omncane, kufanele ube nomqondo walokho okumele ukhethe nokuthi ungakha kanjani isayithi ngendlela engcono.
I-WordPress igama elingadingi isingeniso. Lesi sigaba samathuluzi amandla amaningi amawebhusayithi kunani elikhulu lamavava ku-intanethi. Esikhundleni sokulayishwa ngokuqondile kwamafayela kuma-server wokudala amawebhusayithi, ungasebenzisa i-WordPress ekwakheni amafayela we-backend bese uwahambisa ngendlela engcono. Kulokhu, kuzodingeka udale, uphathe futhi uhlele wonke amakhasi wewebhu futhi udale okuqukethwe kwekhwalithi, ukuthunyelwe kwebhulogi, futhi ulayishe izithombe eziningi. I-Wordpress uhlobo lokuphathwa kokuqukethwe kokuqukethwe kwamabhugons okuthuthukiswa kwewebhu. Loluhlelo lomthombo ovulekile lunikeze abasebenzisi balo ngezindlela eziningi nezinketho ongakhetha kuzo. Ithuluzi, eyaziwa ngokuthi i-WordPress.org, yilapho ungasheshe uthathe amakhophi wesofthiwe kanye nomsebenzi owenzile. Kuyindlela yokuzimela, futhi awunikezwa igama lesizinda eliqondisiwe. Ungakha amawebhusayithi amaningi kule platform njengoba kungenzeka ngaphandle kwesidingo sokuba negama lesizinda neseva ehlukile. I-Wordpress.com, ngakolunye uhlangothi, isungulwe nguMat Mullenweg futhi yindawo ka-Automattic. Yilapho ungaba negama elihlukile lesizinda futhi ungakha iwebhusayithi yakho ngokwendlela engcono. I-WordPress.com iyisevisi yobuchwepheshe, inikwe amandla amaningi..Ungashicilela okuqukethwe futhi uphakamise isayithi lakho uma ukhokhele imali yesizinda kanye nenkampani yokubamba iwebhu.
Abantu abahlukahlukene bacwaninga i-WordPress futhi babheke izindlela zokubeka amawebhusayithi amahhala, futhi kungenzeka kuphela uma une-wordpress.org. Kodwa uma usebenzisa i-wordpress.com, kuzomele ukhokhe imali kokubili ngegama lesizinda nokubamba. Kodwa-ke, izinkampani ezithile zinikeza abasebenzisi babo indawo yama-subdomains mahhala ngisho nalapho bebenzisa igamapress.com.
I-WordPress.com inamandla okusebenza ohlelweni lokukhokha futhi linamakhono amaningi. Uma ubheka ukwakha iwebhusayithi ethize, izindleko ngonyaka unyaka kusuka ku-$ 19 kuya ku-$ 25. Ungathuthukisa iwebhusayithi yakho ye-wordpress.org bese uthola imiklamo yangokwezifiso. Inqwaba yamaphakheji ayatholakala, futhi amanani ahluka kusuka kwinkampani eyodwa yokubamba komunye.
Uma ngabe usebenzisa i-website yamahhala ku-wordpress.org, kunamathuba wokuthi uzoba nokufinyelela okulinganiselwe kumiklamo nemikhakha. Kodwa uma usebenzisa iwebhusayithi ye-wordpress.com, ungathola imiklamo eminingi nezindikimba ongakhetha kuzo. Iwebhusayithi yakho ingakhiwa ngokusemangalisayo futhi ngokumangalisayo nge-wordpress.com, futhi unikezwa okuningi ngezinto zokuklama kanye namafonti ewebhu.
Njengemiklamo nezindikimba, ungathola imisebenzi eminingi nama-plugin ku-wordpress.org, kanti i-wordpress.com inikeza imisebenzi eminingi futhi ama-plugin angaphezu kwalokho okulindelweyo.
Uma usuqumile ukuthuthukisa iwebhusayithi, isinyathelo sakho sokugcina ukubuka inkampani enokwethenjelwa yokubamba bese ukhokha iwebhusayithi ye-wordpress.com Source .